सबैभन्दा बच्चाहरु घर, दैनिक खेल आफ्नो मित्र र साथी बन्न भनेर न्यानो प्राणी बस्ने गर्न चाहन्छु। अक्सर, इच्छा को वस्तु एक बिल्ली को बच्चा हुन्छ, र कहिले काँही पनि सडक जनावर को घर मा आफ्नै बच्चाहरु ल्याउन। स्थिति सरल छैन, तर आमाबाबुले बिल्ली को बच्चा केटा वा केटी कल गर्न के, र त्यसपछि "ईश्वरीय" फारम यसलाई ल्याउन निर्णय गर्नुपर्छ। यो यस्तो अवस्थामा सल्लाह दिन गाह्रो छ, तर यो एक भारी वर्षा भोकाहरूलाई र गरिब प्राणी फालिएको आफ्नो प्रकारको-hearted वाफ गर्न मनोवैज्ञानिक आघात दण्ड दिनु भन्दा, नयाँ परिवार सदस्य को मर्मतका लागि अवस्थाको सिर्जना गर्न सजिलो छ।
निस्सन्देह, यो हुन सक्छ एक परिवार परिषद अनुमोदन जनावर को सबैभन्दा उपयुक्त नस्ल र लिंग निर्धारण गर्न ultimatums गर्न स्थिति ल्याउन छैन र स्वेच्छाले आफ्नो बच्चा एक furry मित्र किन्न, र त्यसपछि राम्रो छ। र भविष्यमा पाल्तु जनावर को मूल यसको होस्टहरूको अझ राम्रो थाहा, त्यसपछि बिल्ली को बच्चा केटा धेरै सुखद हुनेछ कल गर्न के निर्णय। Ironically, यो पुरुष जनावर बच्चाहरु संग सबै भन्दा परिवार द्वारा मनपरेको छन् धेरै भविष्यमा feline सन्तान, बिरालो ल्याउनेछ जो गडबड चाहने छैन छ।
त्यहाँ मात्र होइन भ्रम सिर्जना र बच्चाहरु र वयस्क लागि विभिन्न संक्रामक रोगहरु को स्रोत घरमा जनावरको छैन तपाईं के भन्नुहुन्छ। उचित मर्मतसम्भारको र समसामयिक चिकित्सा रोकथाम संग, बिरालो मानव स्वास्थ्य एक खतरा बन्न गर्दैन। तर बच्चा यसलाई यति निर्भर छ जो जीवित प्राणीलाई, गर्न जिम्मेवारी र ध्यान सिक्न सम्भावना छ। यस बिल्ली को बच्चा केटा कसरी नाम: उमेर बच्चाहरु बिना केवल एक बिन्दु एक बिरालो को जीवन मा आफ्नो सहभागिता सीमित छैन, आफ्नो पाल्तु जनावर हेरचाह गर्न सिकाउनुभयो गर्नुपर्छ। तपाईं आफ्नो बच्चा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले पक्कै पनि खुवाउन र वार्ड हिंड्न खुसी हुनेछ वयस्क को आशा पूरा गर्न सक्षम हुनेछ।
एक furry मित्र खरीद "किनारा थियो" र सडक bums को भाग्यमानी मालिक हुन चाहँदैनन् भने, यो चयन गर्न समय। सम्भव "एक निकल लागि" साथीहरूसँग एउटा बिरालोको बच्चा किन्न - विशेष गरी वसन्त बिरालोको बच्चाहरुको रुचि व्यापक पर्याप्त छ। त्यहाँ एक विकल्प छ र थप गम्भीर, आफ्नो महत्वाकांक्षा खातिर आदरणीय आमाबाबु, बस एक बिरालो बच्चा दिन Aspire तिनीहरूले एक purebred पशु को खरीद मा एक वित्तीय लगानी बनाउन छ। यस मामला मा, यो विकल्प संग miscalculate गर्न महत्वपूर्ण छ, बिरालोहरु केही जातिहरु पनि आक्रामक, छैन बच्चाहरु को लागि पनि उपयुक्त छन्। निस्सन्देह, किनभने घरमा आउँदै, जनावर धेरै वर्ष को लागि परिवारको पूर्ण सदस्य हुन्छ, धेरै जिम्मेवार दृष्टिकोण आवश्यक छ। Bes महत्त्वपूर्ण शङ्का, र कसरी बिरालोको बच्चा केटा, जनावर कान गर्न सुखद र सकारात्मक घरमा बस्ने सबै मानिसहरूले कथित हुनुपर्छ उपनाम नाम।
विनोदी उपनाम सबै प्रकारका रमाइलो गर्न, र तिनीहरूले जनावर लागि असामान्य र हास्यास्पद उपनाम लागि चित्रमाला मा अक्सर धेरै युवा जोडे। आज बिल्ली को बच्चा केटा मजा कल गर्न कसरी असामान्य जानकारी, र छैन केही प्रत्यक्ष-फेद हास्यास्पद नामका: चिकन, केक, पीच, खुबानी, Busia, Basia, Fenya बोनस वा बँदेल। जनावर आफ्नो व्यवहार को आधार मा जन्मेका छौं कहिलेकाहीं उपनाम: flycatcher, Backscratcher, Zhirik। मिकी, Maxi, टम Barsik जस्ता रोचक उपनाम।
अर्को एकदम "aristocrats" छ। यदि एक बिरालो शीर्षक आमाबाबुले मालिक, त्यसपछि अक्सर आफ्नो नाम स्थिति अनुसार चयन गरिएका छन्। तपाईं बिल्ली को बच्चा केटा कल गर्न सक्छन् भने उहाँले, उदाहरणका लागि, "Briton": Archibald, Askold वा एन्डी। पाठ्यक्रम यद्यपि, नाम महत्वपूर्ण छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रेम र रत्तीएको आफ्नो मान्छे देखि बिल्ली को बच्चा हेरचाह। कुकुर को लोयल्टी बारेमा सामान्य misconception बावजुद बिरालो आफ्नो मालिक कुनै कम ध्यान र भक्तिको, त्यो केवल प्रकृति बिरालो एक्लै हिंड्न tends, र मित्र कुनै एक जन्म देती छ दिन्छ।
कुकुर किन मीठो हुन सक्दैन? कसरी कुकुर खुवाउन
संगमरमर क्यान्सर जलजीवालय। मर्मतका र खेती
घरमा सरल पर्म कपाल
सीएस मा अग्रिम: जानुहोस्। को सीएस सबै उपलब्धिहरू कसरी प्राप्त गर्न: GO?
चरण निर्देश द्वारा चरण: Windows7को अपग्रेड रद्द गर्न कसरी
छाल कीरा लागि सबै भन्दा राम्रो उपाय छनौट
स्कूल लागि बच्चाको तत्परता कसरी निर्धारण
सबै भन्दा राम्रो मास्को मा स्त्रीरोग विशेषज्ञ-एन्डोक्राइनोलजस्ट, रोगी प्रशंसापत्र, समीक्षा र सम्पर्क